Kolikoly, fanodinkodinam-bolam-panjakana: hiverina hotsaraina ry Mbola Rajaonah sy Claudine… | NewsMada
Kolikoly, fanodinkodinam-bolam-panjakana: hiverina hotsaraina ry Mbola Rajaonah sy Claudine…
Tsy mbola mifarana eo. Hiditra amin’ny andiany faharoa ny fitsarana ireo raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana sy kolikoly. Hanomboka ny volana septambra izao izany ka anisan’ny hiverina hotsaraina eny amin’ny Tendrom-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac) ireo mpandraharaha maromaro…
Anisan’ny hotsaraina amin’izany amin’ny raharaha roa hafa, ny mpandraharaha Razaimamonjy Claudine. Efa nahazo sazy figadrana asa an-terivozona, mandritra ny 7 taona sy fandoavana lamandy mitentina 100 tapitisa ar ny tenany. Didim-pitsarana nivoaka ny 20 aogositra teo izany ary anisan’ny niampangana azy ny fanodinkodinam-bola-panjakana sy fanaovana kolikoly amin’ny tsenam-baro-panjakana. Hiverina hotsaraina koa ilay mpandraharaha sady mpanolotsain’ny filoha teo aloha, Rajaonah Mbola. Nafahana madiodio amin’ny raharaha iray, taratasim-bola tsy misy antoka ny tenany satria nambaran’ny mpitsara eo anivon’ny Pac fa tsy mitombina ny vesatra niampangana azy, tamin’ny raharaham-pitsarana natao ny faran’ny volana jolay teo. Enim-bolana izy izao no eny amin’ny fonjan’i Tsiafahy ary vesatra hafa hanenjehana azy ny hiakarany Fitsarana, amin’ny septambra ho avy io. Anisan’izany ny fanaovana hosoka amin’ny fadin-tseranana sy ny famotsiam-bola.
Ny depiote Hasimpirenena
Sambany hiakatra eny amin’ny Pac kosa ny depiote voafidy any Fandriana, Rasolomampionona Hasimpirenena, mbola voatazona any am-ponja amin’izao fotoana izao. Anisan’ny vesatra iampangana azy ny fivarotana tany amin’ilay raharaha “Villa Elisabeth”. Miankina amin’izany ny ho avy politikany satria vita hatreo ny aminy raha tsy mbola voatsara mialoha ny faran’ny taona na mialoha ny fivoriana ara-potoan’ny Antenimierampirenena ity olom-boafidy ity. Hanambara ny fahabangan-toerana ny HCC ary hiakatra avy hatrany ny mpisolo toerana azy eny amin’ny seza eny Tsimbazaza.
Ahitana mpitondra teo aloha sy mpandraharaha
Manampy ireo hiakatra eny amin’ny Pac, ny loholona Andriamihaingo Berthin. Nidoboka am-ponja vonjimaika eny Antanimora, ny sabotsy 4 mey lasa teo. Voasaringotra amina raharaha fanodinkodinana volabe manodidina ny 618 137 053,72 Ar niaraka tamina olona maromaro ity olon’ny HVM teo aloha ity. Tsenam-baro-panjakana tsy mazava mifandraika tamin’ny fividianana fitaovana fampangatsiahana tao amin’ny sampandraharaha momba ny resaka vaksiny “Direction de Programmation Elargie de Vaccination” – DPEV izy io. Namatsy vola izany ny “Global Alliance for Vaccines and Immunization” – Gavi.
Tsiahivina fa vita tamin’ity volana aogositra ity ny fitsarana andiany voalohany. Maro anisa amin’ireo ny fanodinkodinam-bolam-panjakana. 60 ireo olona voarohirohy tamin’ny raharaha miisa 10. Ahitana mpitondra teo aloha sy mpandraharaha ary olon-tsotra ireo raharaha efa nandalo teny amin’ny 67 ha ireo.